ထီးလှုပ်ရှားမှု ဆန္ဒပြသမား ၉ ယောက် အပြစ်ရှိကြောင်း ဟောင်ကောင် တရားရုံး ဆုံးဖြတ်
ထီးလှုပ်ရှားမှု ဆန္ဒပြသမား ၉ ယောက် အပြစ်ရှိကြောင်း...
10 เม.ย. 2562 - 00:29 น.
ဟောင်ကောင် ဒီမိုကရေစီရေး လှုပ်ရှားမှု အဓိက ခေါင်းဆောင် ၃ ယောက်
ဟောင်ကောင် ဒီမိုကရေစီအရေး တက်ကြွ လှုပ်ရှားသူ ၉ ယောက်ကို အများပြည်သူ အပေါ် ထိခိုက် နစ်နာစေမှုနဲ့ အပြစ်ရှိကြောင်း တရားရုံးက ဆုံးဖြတ် လိုက်ပါတယ်။
ဟောင်ကောင် ထီးလှုပ်ရှားမှု ဆန္ဒပြပွဲလို့ အသိများခဲ့တဲ့ ၂ဝ၁၄ အာဏာဖီဆန်ရေး လှုပ်ရှားမှုတွေထဲ ပါဝင် ပတ်သက်ခဲ့သူတွေ ခုလို အမိန့်ချခံတာ ဖြစ်ပါတယ်။
တရုတ်ပြည်မကြီး အစိုးရရဲ့ စွက်ဖက် ချုပ်ကိုင်မှုကနေ ကင်းလွတ်ပြီး ဟောင်ကောင် ရွေးကောက်ပွဲတွေ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ကျင်းပခွင့် ရှိရေးကို ၂ဝ၁၄ ဆန္ဒပြပွဲတွေ အတွင်း တောင်းဆို ခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဟောင်ကောင်မှာ လူတွေ ထောင်သောင်းချီ စုဝေးပြီး ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာမှာ မြို့ရဲ့ အချက်အခြာနေရာတွေ၊ အဓိက လမ်းမကြီးတွေပေါ် နေရာယူ သိမ်းပိုက်ခဲ့ကြသလို၊ သပိတ်စခန်းတွေ ဖွင့်လှစ်တာမျိုး နှစ်လကျော်ကြာ ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။
အဲဒီ အပြုအမူတွေဟာ အများပြည်သူကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေပြီး လူတချို့ ထိခိုက် ဒဏ်ရာ ရခဲ့ရတယ်လို့ တရားသူကြီး ဂျော်နီချန်းက သူ့ရဲ့ အမိန့်လွှာထဲ ထည့်သွင်း ပြောထားပါတယ်။
အဲဒီလို အများပြည်သူကို ထိခိုက် နစ်နာစေခဲ့မှု၊ အန္တရာယ်ဖြစ်အောင် လှုံ့ဆော်ခဲ့မှုတွေနဲ့ အပြစ်ရှိကြောင်း ထီးဆန္ဒပြပွဲတွေရဲ့ အဓိက ခေါင်းဆောင်တွေ အဖြစ် အများက ရှုမြင်ထားတဲ့ ၃ ဦး အပါအဝင် စုစုပေါင်း ၉ ဦးကို အပြစ်ရှိကြောင်း တရားသူကြီး ချန်းက ဆုံးဖြတ်ပါတယ်။
အဲဒီ ပုဒ်မတွေဟာ ထောင်ဒဏ် ၇ နှစ်အထိ အပြစ်ပေးနိုင်တဲ့ ပုဒ်မတွေ ဖြစ်ပေမယ့် လောလောဆယ်တော့ ဘယ်လို ပြစ်ဒဏ်မျိုး ကျခံရမယ် ဆိုတဲ့ အမိန့်တော့ ထွက်မလာ သေးပါဘူး။
ဟောင်ကောင် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေး လိုလားသူတွေ တရားရုံးရှေ့ စုဝေး
ဟောင်ကောင် သိမ်းပိုက်ရေးလှုပ်ရှားမှု တြိရတနာ
၂ဝ၁ဝ ပြည့်ကျော်နှစ်တွေမှာ အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ လက်ဝါးကြီးအုပ် စီးပွားရေး စနစ် ဆန့်ကျင်ရေး၊ လူမှု အသိုင်းအဝိုင်းအတွင်း တန်းတူညီမျှမှု ရှိရေး တောင်းဆို သံတွေနဲ့ ဆန္ဒပြပွဲတွေ ပေါ်ပေါက် ခဲ့ပါတယ်။
ဆန္ဒပြသမားတွေဟာ မြို့တော်တွေရဲ့ လမ်းမတွေနဲ့ အထင်ကရနေရတွေမှာ စတည်းချ သပိတ်စခန်းဖွင့်တာမျိုးတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာမို့ သိမ်းပိုက်ရေး လှုပ်ရှားမှု "occupy movement" တွေ ဆိုပြီး ခေါ်ဆို ခဲ့ကြပါတယ်။
ဟောင်ကောင်မှာလည်း ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေး အဆင့်အတန်းကို ပြည်မကြီး အစိုးရရက ထိန်းချုပ် ကန့်သတ်လာတယ်လို့ မကျေမနပ် ဖြစ်ကြသူတွေ လမ်းတွေပေါ်ထွက် ဆန္ဒပြလာ ခဲ့ကြတဲ့ အခါ အထင်ကရနေရာတွေ၊ လမ်းတွေပေါ် လနဲ့ချီ စတည်းချတာမျိုး ပြုလုပ် ခဲ့ကြတာမို့ ဟောင်ကောင် သိမ်းပိုက်ရေး လှုပ်ရှားမှု အဖြစ် အသိများပါတယ်။
ထောင်သောင်းချီ စုဝေးခဲ့ကြတဲ့ ၂ဝ၁၄ ဟောင်ကောင် အာဏာဖီဆန်ရေး လှုပ်ရှားမှု
ရဲတွေ ငရုတ်ရည်နဲ့ ပက်တဲ့ ရန်က ကာကွယ်ဖို့ ထီးတွေကို ဆောင်ခဲ့ရာက ဟောင်ကောင် အဝါရောင် ထီးလှုပ်ရှားမှု အဖြစ် အမည်တွင်ခဲ့
ဒီ ဟောင်ကောင် လှုပ်ရှားမှုမှာ အဓိက ဦးဆောင်သူ ၃ ယောက် ရှိတယ်လို့ သတ်မှတ် နိုင်တာမှာ သူတို့ကို ဟောင်ကောင် သိမ်းပိုက်ရေး တြိရတနာ "Occupy trio" ဆိုပြီး ရည်ညွှန်းကြပါတယ်။
သူတို့ကတော့ လူမှုဆက်ဆံရေး ဘာသာရပ် ပါမောက္ခ အသက် ၆ဝ အရွယ် ချန် ကင်-မင်၊ ၅၄ နှစ် အရွယ် ဥပဒေပါရဂူ ဘင်နီတိုင် နဲ့ ဟောင်ကောင် နှစ်ခြင်း ခရစ်ယာန် အသင်းတော် အကြီးအကဲ အသက် ၇၅ နှစ် အရွယ် ချု ယွိ-မင်တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ ၃ ယောက်ဟာ အာဏာဖီဆန်ရေး လှုပ်ရှားမှု စတင်ခဲ့သူတွေ၊ လူအများ ပါဝင်လာအောင် ဆော်ဩ နိုင်ခဲ့ကြသူတွေ အဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
သတင်းထောက်တွေကို စကားပြောခဲ့တဲ့ ဘင်နီတိုင်
"ဒီကနေ့ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်လာလာ … ကျွန်တော်တို့ ဆက်လှုပ်ရှားသွားမယ်၊ အလျှော့ပေးမှာ မဟုတ်ဘူး" လို့ ဥပဒေ ပညာရှင် မစ္စတာတိုင်က တရားသူကြီးရဲ့ အမိန့် ထွက်မလာခင် အစောပိုင်းတုန်းက သတင်းထောက်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံစဉ် ပြောခဲ့ပါတယ်။
တရားသူကြီး ဂျော်နီချန်း အမိန့်ချတဲ့ အခါမှာတော့ မစ္စတာတိုင်၊ မစ္စတာ ချန်နဲ့ တခြားသူ ၅ ဦးကို အများပြည်သူ ထိခိုက်မှုနဲ့ဆိုင်တဲ့ ပုဒ်မ နှစ်ခုစီနဲ့ အပြစ်ရှိတယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ပြီး၊ မစ္စတာချုနဲ့ ကျန်တစ်ဦးကို ပုဒ်မ တစ်ခုနဲ့ အပြစ်ရှိတယ်လို့ သတ်မှတ် ခဲ့ပါတယ်။
ပြစ်ဒဏ်ဘယ်လောက် ကျခံရမယ် ဆိုတာ ဘယ်တော့ ဆုံးဖြတ်မလဲ ဆိုတာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မသိရသေးပါဘူး။
စိတ်ဓာတ်တွေ မြင့်မားနေဆဲ အာဏာဖီဆန်သူတွေ
အမှုရင်ဆိုင်နေရသူ ၉ ယောက် တရားရုံးထဲ ဝင်လာခဲ့ကြတုန်းက အင်မတန် ရွှင်ရွှင်လန်းလန်း စိတ်ဓာတ်ခွန်အား အပြည့် ရှိနေကြတာ တွေ့ရတယ်လို့ ဟောင်ကောင်မှာ ရှိတဲ့ ဘီဘီစီ တရုတ်ဘာသာစကား သတင်းဌာနက မာတင်ရစ်(ပ) က ဆိုပါတယ်။
နှစ်ရှည်လများ ထောင်သွင်း အကျဉ်းချ ခံရနိုင်တဲ့ အမိန့်မျိုး ကြုံလာရဖို့ လက်တစ်ကမ်း အလို အခိုက်အတံ့မှာတော့ အဲဒီသူတွေဆီမှာ ကြောက်ရွံ့ တုန်လှုပ်နေတာမျိုး ရှိမနေဘူးလို့လည်း ဘီဘီစီ သတင်းထောက်က ဆိုပါတယ်။
တရားရင်ဆိုင်ရသူတွေမှာ ကြောက်ရွံ့မှု မတွေ့ရ
တရားသူကြီး အမိန့်စာ ဖတ်နေချိန်မှာလည်း သူတို့အားလုံး အေးအေးဆေးဆေး တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ပဲ ရှိနေခဲ့ပါတယ်။
ထောင် ဘယ်နှစ်နှစ် ကျခံရမယ်ဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်မျိုး တရားသူကြီးက မပြုလုပ်ခဲ့ပဲ နေ့လည်ပိုင်းမှာ သူတို့ အားလုံး အာမခံနဲ့ ပြန်လွတ်လာပါတယ်။
သူ့အနားက ဖြတ်အသွား ဟောင်ကောင် လှုပ်ရှားမှု ခေါင်းဆောင် ၃ ယောက် စလုံးက သူ့ကို ပြုံးပြုံးရီရီနဲ့ နှုတ်ဆက်သွားတယ်လို့ မာတင်ရစ်(ပ)က ပြောပါတယ်။
သူတို့ကို ကြည့်ရတာ တရားရုံးမှာ အမှုကြီး ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ သည်းထိတ်ရင်ဖို နေ့မျိုး ရင်ဆိုင် နေရသူတွေနဲ့ မတူပဲ သာမန် နေ့ရက်တစ်ရက်ကို ကျော်ဖြတ်နေသူတွေ အလားပဲလို့ မာတင်ရစ်(ပ)က မှတ်ချက်ချပါတယ်။
ဒီရက် မတိုင်ခင်အကြို ဘင်နီတိုင် ဘီဘီစီကို ပြောခဲ့တာမှာလည်း "ဟောင်ကောင် ဒီမိုကရေစီ အရေးအပေါ် စိတ်ပျက် အားလျှော့သူတွေ ရှိကောင်း ရှိလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် လုံးဝ လက်လျှော့ အရှုံးပေးမှာ မဟုတ်တဲ့ သူမျိုးတွေလည်း ရှိနေသေးတာ သူတို့ တွေ့မြင်နိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်" လို့ ပြောထားပါတယ်။
ဆန္ဒပြသမားတွေအပေါ် ပစ်မှတ်ထားမှုရဲ့နောက်ဆက်တွဲ ဂယက်
ဆန္ဒပြသမားတွေမှာ အပြစ်ရှိကြောင်း ဆုံးဖြတ်ရင် ဟောင်ကောင် လူမှု အသိုင်းအဝိုင်း တစ်ခုလုံးကို ခြိမ်းခြောက်ရာ ရောက်မယ်လို့ အတိုက်အခံတွေ၊ လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့တွေ သတိပေးနေ ခဲ့ကြတဲ့ အပေါ် သူ သဘောမတူဘူးလို့ တရားခွင်မှာ တရားသူကြီးချန်းက ပြောခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီနောက် အပြစ်ရှိကြောင်း တကယ်လည်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့ နောက်မှာတော့ လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့တွေရဲ့ ဝေဖန်သံတွေလည်း ပေါ်ပေါက်စေပါတယ်။
လူတွေကို ခြိမ်းခြောက်ရာရောက်တဲ့ တရားရုံးဆုံးဖြတ်ချက်ဆိုပြီး လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့်ရေး အဖွဲ့ HRW က ထုတ်ပြန်ပါတယ်။
ဟောင်ကောင်ရဲ့ နောက်ဆုံး ဗြိတိသျှ ဘုရင်ခံ အဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့တဲ့ လော့ဒ် ခရစ္စ ပက်တန်ကလည်း ခေတ်နဲ့ လိုက်လျောညီထွေ မရှိတော့တဲ့ ကျင့်ထုံး ဥပဒေဟောင်းကို သုံးပြီး နိုင်ငံရေး လက်တုံ့ပြန်တဲ့ အနေနဲ့ ဆုံးဖြတ်တာဖြစ်လို့ အင်မတန် အငြင်းပွားဖွယ် ဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဟောင်ကောင် ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ၂ဝ၁၄ လူထုအုံကြွမှု အပြင် နောက်ပိုင်း နှစ်တွေမှာလည်း ဟောင်ကောင် ဥပဒေပြု အဖွဲ့အတွင်းမှာကို အာဏာဖီဆန်မှုတွေ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲနိုင်ပြီး ဟောင်ကောင် ဥပဒေပြု အဖွဲ့ထဲ ရောက်လာသူတွေ ကျမ်းသစ္စာ ကျိန်ဆိုကြတဲ့ အခါ ဆိုရမယ့် စကားလုံးတွေကို ပြောင်းလဲပြီး ပြည်မကြီး အစိုးရကို အာခံတဲ့ စကားလုံးတွေ ထည့်သွင်း ပြောခဲ့လို့ နေရာက ပြန်လည် ဖယ်ရှားခံရသူ ၆ ဦး ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဟောင်ကောင် ဒီမိုကရေစီ ရှေ့ခရီး
ဒါ့အပြင် ဟောင်ကောင်ဒီမိုကရေစီ အရေး၊ ပြည်မကြီး ဩဇာက ကင်းလွတ်ရေး၊ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ရွေးကောက်နိုင်ခွင့် ရှိရေးတို့ကို လိုလားသူတွေဖြစ်လို့ ဥပဒေပြု အဖွဲ့ထဲ ပါဝင်ဖို့ အရည်ချင်းမပြည့်မှီသူတွေ အဖြစ် သတ်မှတ် ခံရသူတွေလည်း ရှိပါတယ်။
ဘေဂျင်း အစိုးရက အတည်ပြုထားတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကိုပဲ ဟောင်ကောင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး အဖြစ် ရွေးကောက်ခွင့် ရှိတဲ့ အပေါ် ဟောင်ကောင် ဒီမိုကရေစီ အရေး လိုလားသူတွေ အဓိက မကျေမနပ် ဖြစ်ကြတာပါ။
၁၉၉၇ မှာ ဟောင်ကောင်ကို ဗြိတိသျှ ကိုလိုနီအဖြစ်ကနေ ပြည်မကြီး အစိုးရ ပြန်လည် လွှဲပြောင်း ယူခဲ့တုန်းက အနှစ် ၅ဝ အတွင်း နိုင်ငံခြားရေးနဲ့ ကာကွယ်ရေး ကိစ္စတွေက လွဲပြီး ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့် ရှိစေရမယ်လို့ အာမခံချက် ပေးထားပါတယ်။
ခုတော့ အဲဒီ ကတိကဝတ်ကို ပြည်မကြီး အစိုးရက ဖောက်ဖျက်နေပြီး ဟောင်ကောင်ကို ပိုပြီး ထိန်းချုပ်လာတယ်လို့ အတိုက်အခံတွေက ပြောပါတယ်။
၂ဝ၁၄ ဆန္ဒပြ ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဂျော့ရွှာဝေါင်း ဘီဘီစီကို ပြောတာကလည်း ....
"ဟောင်ကောင် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေး အပေါ် ဘေဂျင်း အစိုးရက ဘယ်လောက် ကန့်သတ်နေသလဲ ဆိုတာ အခုတရားရုံး ဆုံးဖြတ်ချက်က သက်သေပဲ၊ လွတ်လပ်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲတွေကို ခွင့်မပြုတဲ့ သမ္မတ ရှီကျင်းပင်ရဲ့ တင်းမာတဲ့ မူဝါဒ ဖြစ်တယ်" လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဟောင်ကောင် ဒီမိုကရေစီရေးဟာ တိုက်ပွဲရှည်ကြီး ဖြစ်ပြီး၊ လက်ရှိ ဘယ်လို ဖိနှိပ်မှုတွေ ကြုံနေရသည် ဖြစ်စေ ရှေ့ဆက် ချီတက်မယ်လို့လည်း ဂျော့ရွှာဝေါင်းက ပြောပါတယ်။
อัลบั้มภาพ ထီးလှုပ်ရှားမှု ဆန္ဒပြသမား ၉ ယောက် အပြစ်ရှိကြောင်း ဟောင်ကောင် တရားရုံး ဆုံးဖြတ်